အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးလေဆာရောင်ရီးယားကားမီးပွားပလပ် - 1D | 1D;ONE
လက္ကားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအပြည့်အဝ gasket စက်ရုံကောင်းနှင့်အတူ 1d; တစ်ခု
အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးလေဆာရောင်ရီးယားကားမီးပွားပလပ် - 1D
Spark plug.pdf ဒေါင်းလုပ်
1D; အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးလေဆာရောင်ရီးယားကားမီးပွားပလပ် - 1D; တစ်ခု, စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်
spark plug ကိုအများအားဖြင့် spark plug ကို Plused Wire Wire (Nozzle Wire) မှ SPART PLARGROLD နှစ်ခုအကြားရှိလေထုကို ဖြတ်. လေထဲကိုဖြတ်ပြီးလျှပ်စစ်မီးခွက်များအကြားရှိလေထုမှတဆင့်ဖြတ်သန်းရန်အသုံးပြုသည် ဆလင်ဒါ၌ရောထွေးဓာတ်ငွေ့ကိုလောင်ကျွမ်းစေရန်။ အဓိကအမျိုးအစားများမှာ - Quasi Spark plug, Edge Spark Plug, Electrade Spark Plug, Separ SPARP PLAK, PLARK PLAK, Electrode Spark Plug, Surface Jump Spark plug,
မီးပွားပလပ်အင်အင်ဂျင်၏ဘေးထွက်သို့မဟုတ်ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ အစောပိုင်းကာလများတွင်မီးပွားပလပ်သည်ဆလင်ဒါလိုင်းဖြင့်ဖြန့်ဖြူးသူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မကြာသေးမီဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းကားများရှိအင်ဂျင်များသည်အခြေခံအားဖြင့်စက်နှိုးကွိုင်နှင့်မီးပွားပလပ်များအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ SPARK plug ၏လုပ်ငန်းဗို့အားအနည်းဆုံး 10000v နှင့်ဗို့အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို 12V လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုမီးပွားကွိုင်မှထုတ်လုပ်သည်
spark plug ၏အလုပ်လုပ်နိယာမ
မြင့်မားသောဗို့အား၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ဗဟိုလျှပ်စစ်အကြားရှိလေထုနှင့် spark plug ၏ဘေးထွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်ဘေးထွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည်လျင်မြန်စွာတရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သောအခမဲ့အီလက်ထရွန်များဖြစ်ပေါ်လာသည်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအကြားဗို့အားသည်အချို့သောတန်ဖိုးကိုရောက်ရှိသည့်အခါဓာတ်ငွေ့ရှိအိုင်းယွန်းများနှင့်အီလက်ထရွန်အရေအတွက်သည်ပြိုလဲခြင်းနှင့်တူသည်။ ထို့ကြောင့်လေထုသည်၎င်း၏ insulation နှင့် "ပြိုကွဲသွားသည်" ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယခုအချိန်တွင်ဓာတ်ငွေ့သည်တောက်ပသောခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ၎င်းသည် "မီးပွား" ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အပူတိုးချဲ့မှုနှင့်အတူ၎င်းသည် "pop" အသံကိုလည်းစေသည်။ ဒီလျှပ်စစ်မီးပွားရဲ့အပူချိန်ဟာ 2000 ~ 3000 ℃အထိမြင့်တက်နိုင်ပြီးဆလင်ဒါလောင်ကျွမ်းခြင်းအခန်းထဲမှာအရောအနှောကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်
Spark Expressing Generator အနေဖြင့် Spark Plug သည် broadband plug သည် outrommagnignetic enciromagnetic infraiding source source တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြိုးမဲ့လျှပ်စစ်လယ်ကွင်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြင့်မီးတောက်လောင်နေသောလျှပ်စစ်သံလိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်0င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုနှိုးဆော်ခြင်းကိုနှိမ်နင်းနိုင်ရန်အတွက်ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် On-board outronic devices များအားလုံးကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့် 1960 ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများကခုခံကာကွယ်မှုန့်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်ရေးကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများမှတိုးချဲ့မှုကိုတားဆီးရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများမှတိုးချဲ့ခြင်းကိုတားဆီးရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများကတိုးချဲ့ခြင်းကိုတားဆီးရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများမှတိုးချဲ့မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် SPARK PLUS စက်ဆုပ်ရင့်မှုအင်ဂျင်မှမောင်းနှင်သောမော်တော်ယာဉ်စက်ကိရိယာများကိုတင်းကြပ်စွာကန့်သတ်ထားသည့်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်မတူကွဲပြားသောသမ်းလင့်မှုအတွက်အမျိုးသားစံနှုန်းများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ခုခံပစ္စယ plugs များအတွက်ဝယ်လိုအားသည်အလွန်များပြားလာသည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသောအမျိုးအစား spark plug ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်သာမန်အမျိုးအစားနှင့်မတူပါ, insulator တွင်စပယ်ယာ sealants ကိုခုခံနိုင်သည့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်း မှလွဲ. သာမန်အမျိုးအစားနှင့်မတူပါ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတင်ပါ။ ပစ္စတင်ကွင်းများသည်ရေနံ sump ကို0င်ရောက်ခြင်းမှဖိအားပေးမှုဓာတ်ငွေ့များကိုကာကွယ်ပေးသောပစ္စတင်ကွင်းများအကြားတံဆိပ်ခတ်သည်။ လောင်ကျွမ်းသောအခန်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုမ0င်သောဆီကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်ရေနံသုံးစွဲမှုကိုလည်းသူတို့ကထိန်းညှိပေးသည်။
2012 ခုနှစ်, 1D Auto အစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ကို 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျယ်ပြန့်သောမော်တာရေနံနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကျော်ကြားသောလက်ကားရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်စံနှုန်းများနှင့်အညီဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုစျေးကွက်တွင်သူတို့၏တတ်နိုင်နိုင်ရာစွမ်းရည်နှင့်မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှုသဘောသဘာဝအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်။